Saron-tava fanadiovana an-trano | Sakafo Nutri
Ny fiakaran'ny maripana izay mitranga ao fahavaratra miteraka hatsembohana mitombo. Ny fanasana ny tavanao amin'ny rano madio dia manampy amin'ny fanesorana ny loto ambonimbony sy hamelombelona ny hoditra, fa tsy ampy kosa ny hitazomana ny hoditra ho tsara. Raha te-hihetsika lalindalina kokoa ianao dia ilaina ny manisy maska ​​fanadiovana tsindraindray.
Amin'ity fanamarihana ity dia manolotra anao ireo akora ilaina ilaina hanomanana ao an-trano a saron-tava fanadiovana ny mason-koditra hiadiana amin'ny blackheads sy hanamaivanana ny fivontosana.
1/2 kaopy yaorta tsotra
1/2 kaopy ny puree frezy
Tantely 1/4 kaopy
2 sotro amin'ny koba almond
Ampio ao anaty lovia ny sakafo rehetra voalaza etsy ambony ary afangaro tsara. Manaraka, aparitaho ilay fangaro azo tamin'ilay tarehy efa voasasa sy maina teo aloha. Ny fotoana farafahakeliny mila an'ity maska ​​fanadiovana voajanahary ity hanamaivanana ny fitohanana ao amin'ny mason'ny hoditrao. hoditra tarehy dia 10 minitra. Raha tsy ampiasainao daholo izany dia azonao atao ny manangona azy mandritra ny andro hafa, saingy tadidio fa tsy maintsy ao anaty vata fampangatsiahana izany ary tsy mihoatra ny roa andro, satria miresaka momba ireo akora vaovao isika.
Ny yaourt, frezy ary tantely dia manampy amin'ny fanidiana ireo mason-koditra, izay mihalava mandritra ny fahavaratra, indrindra ireo any amin'ny faritra antsoina hoe T, izay misy ny orona sy ny handrina. Ny lafarinin'ny amygdala, amin'ny lafiny iray, dia miasa ho toy ny exfoliant hanafoanana ny teboka mainty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Fomba fanamboarana sarontava fanadiovana an-trano
Voasarimakirana sakamalao, zava-pisotro mamelombelona sy mahasalama